आखिर किन बोले रमेश खरेल सुन तस्करीमा फसेका प्रहरीको पक्षमा ? | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← छुवाछुत र भेदभावविरुद्ध दृढतापूर्वक उभिन प्रधानमन्त्रीको आहृवान
राष्ट्रपतिलार्इ भेट्न एकैसाथ प्रधानमन्त्रीसहित सत्तारुढ र प्रतिपक्षी नेता →
काठमाडौं, २२ जेठ । ३३ केजी सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या प्रकरणमा नेपाल प्रहरीका पूर्व उच्च अधिकारीहरुले गृह मन्त्रालयको छानविन समिति संयोजक र्इश्वराज पौडेललाई अनुभवहीन भएको आरोप लगाए । पूर्वएआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी, पूर्व डिआइजीद्वय हेमन्त मल्ल र रमेश खरेलले एसएसपी दिवेश लोहनी, डिएसपी प्रजित केसी र सई बालकृष्ण सञ्जेल काबिल प्रहरी अधिकारी भएको र उनीहरूमाथि अभियोग लगाउनु त्रुटिपूर्ण भएको जिकिर गरे ।
अझ पूर्वडीआइजी रमेश खरेलले त चरेशको गिरोह समात्न कुनै बेला आफू ७ किलो चरेश बेच्न गएको प्रसंग समेत सुनाए । सुन काण्डमा समातिएका नेपाल प्रहरीका लोहनी जस्ता क्षमतावान र इमान्दार अनुसन्धानकर्ताहरूको शिर निहुँरिएको दाबी समेत गरे । ३३ किलो सुनकाण्ड र सनम शाक्य हत्या प्रकरणमा यस्ता तथ्यहरू छन् जसले उनीहरूको आरोप र तर्कको कुनै अर्थ राख्दैन । किनकी अदालतले एसएसपी लोहनीले गलत मनासयले काम गरेको भन्दै थुनामा पठाएको थियो । अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘सनम शाक्यको हत्या भएको जानकारी पाए लगत्तै सम्बन्धित इलाका प्रहरीलाई घटनाको जानकारी नगराई दोषीलाई तुरुन्तै पक्राउ गराउनु पर्ने कानूनी कर्तव्य रहेकोमा एसएसपी दिवेश लोहनीले सो कार्य नगरी आफ्ना प्रहरी अधिकृतलाई खटाएको देखिन्छ । त्यसरी खटाउँदा आफूले माथिल्लो तहबाट निर्देशन लिएको भन्ने निजको भनाइतर्फ विचार गर्दा माथिल्लो निकायबाट पनि गैरकानूनी कार्य गर्न निजलाई निर्देशन भएको भन्ने सम्झन पनि मिल्दैन ।’
अदालतले डिएसपी प्रजित केसी र सई बालकृष्ण सञ्जेलले हत्या र तस्करीका मुख्य नाइके चुडामणि उप्रेती ‘गोर’सँग फोन सम्पर्क गरी मुद्दा मिलाउने सन्दर्भमा वार्ता गर्दै धरानमा मृतकको लास मगाएको र लासलाई मोरङ पु¥याइ रातभर होटेलमा राखेर शंकास्पद कार्य गरेको जनाएको छ ।
चालक टेकराज मल्ल ठकुरीसँग निज प्रहरीको धरानमा भेट भई लास विभिन्न ठाउँमा घुमाउँदै इटहरीबाट धरान लगिएको र पुनः इटहरीबाट विराटनगर लगेर मात्र शव बरामद गरेको देखाइ जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङलाई बुझाएको अनुसन्धानबाट देखाइसकेको छ ।
शव विभिन्न ठाउँमा घुमाइरहेको समयमा गोरे समेतका मुख्य अभियक्तहरूले भाग्ने मौका पाएको देखिएको छ । उर्लाबारीबाट शव धरान–इटहरी हुँदै मोरङ ल्याउनुपर्ने त्यस्तो के गम्भीर परिस्थिति परेको हो भन्ने कुरा मिसिलबाट खुल्दैन । मोरङ जिल्ला अदालतको आदेशमा थुप्रै विषय उल्लेख छन् ।
अपराधी पक्राउ गर्न रकमको बार्गेनिङ गरिरहेको भन्ने समेत सई सञ्ञ्जेल र डिएसपी केसीको बयानबाट देखिएको छ । अदालतको दृष्टिमा उनीहरूको भनाइ बमोजिम न त मुख्य अभियुक्तहरू पक्राउ परे, न त उनीहरूले कानून अनुकूलको कार्य गरेको देखियो ।
अपराधी पक्राउ गर्न रकमको बार्गेनिङ गरिरहेका डिएसपी केसी र सई सञ्ञ्जेलको टेलिफोन अडियो समेत सार्वजनिक भएको छ । तर, डिआइजी खरेलले अपराधी पक्राउ गर्न चरेसको प्रसँग गरे जस्तो न त हत्या र तस्करीका नाइके गोरे पक्राउ परे, न त सुन नै बरामद् भयो ।
यो कुरालाई अदालतले गम्भीर त्रुटिका रुपमा लिएको छ । लोहनी र केसीले गरेको अर्को गम्भीर गल्ती हो, हत्याका योजनाकार गोरेलाई अभियुक्त नबनाउनु । गोरे, केसी र सन्जेलबीचको वार्तालापमा पनि गोरेलाई अभियुक्त अर्थात प्रतिवादी नबनाउने सम्झौता भएको छ ।
जुन कुराको अडियो नै बाहिर आएको छ । अनि यो पनि अभियुक्त समात्ने नाटक हो र ? पूर्वएआइजी भण्डारी, पूर्वडिआइजीद्वय मल्ल र खरेलले भने जस्तै लोहनी काबिल प्रहरी अधिकारी हुन् । के उनीहरूले माथिका यी तथ्यलाई लोहनी काबिल प्रहरी अधिकारी भनेकै भरमा नकार्न सक्छन त ?
पूर्वडिआइजी खरेल उनै प्रहरी उच्च अधिकारी हुन् जसले आफ्नी पत्नीलाई सुराकी खडा गरेर सुनबाट कमिशन खाएका थिए । अहिले आएर उनै खरेल अभियुक्तहरूको पक्षमा बोल्न थालेका छन् । पत्नीलाई सुराकी खडा गरेको अभियोगमा खरेलले संसदका सार्वजनिक लेखा समितिमा केही बर्ष पहिले बयान दिनुपरेको थियो ।
पूर्वएआइजी र पूर्व डिआइजीहरूले किन अनुसन्धानको दायरामा रहेका एसएसपी लोहनी, डिएसपी केसी र सई सञ्जेलका पक्षमा जसरी बयान दिएका छन्, त्यसले ठूलो आशंका उब्जाएको छ । उनीहरूले अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित बनाउन षड्यन्त्र गरेको गृह मन्त्रालयको आशंका छ ।
त्यति मात्रै होइन, ३३ किलो सुनकाण्ड र सनम शाक्य हत्यामा दोषीको पक्षमा देखिएका पूर्वडिआइजी खरेल उनै प्रहरी उच्च अधिकारी हुन् जसले आफ्नी पत्नीलाई सुराकी खडा गरेर सुनबाट कमिशन खाएका थिए । अहिले आएर उनै खरेल अभियुक्तहरूको पक्षमा बोल्न थालेका छन् । पत्नीलाई सुराकी खडा गरेको अभियोगमा खरेलले संसदका सार्वजनिक लेखा समितिमा केही बर्ष पहिले बयान दिनुपरेको थियो ।
भण्डारी, मल्ल र खरेलले वर्तमान सरकारलाई असहयोग र बद्नाम देखाउनका लागि अभियुक्तको पक्षमा अभिव्यक्ति दिएको आरोप लागेको छ । पूर्वएआइजी भण्डारीले आफ्नो नाता पर्ने व्यक्तिले सञ्चालन गरेको सञ्चारमाध्यमलाई प्रयोग गरेर केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई ३३ किलो सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्याकाण्डमा बद्नाम गराउन खोजेको आशंका गरिएको छ ।
भण्डारी, मल्ल र खरेललाई यो विषयमा जथाभावी नबोल्न गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले चेतावनी दिइसकेका छन् । भण्डारी, मल्ल र खरेल आफैले खनेको खाडलमा फस्ने सम्भावना बलियो बनेको छ ।(दैनिक नेपाल )